Jesubi: Chidimbu Chemhando Yekuda | Martech Zone
Muvhuro, March 21, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kana CRM yako iri pakati pekugadzirisa yako yekuda chizvarwa, timu yako inogona kushushikana nekuwanda kwenguva yavanoshandisa kupinda data pane kunyatso kusimudzira zvinotungamira nekushanda kusvika padyo. (Ndinoziva ndanga ndiri munguva yakapfuura!)
Jenny Vance nechikwata chake pa MutungamiriJen vakagumbuka zvekuti ivo vaive Jesubi kuvaka yekumberi-kumagumo iyo yakarerutsa maitiro zvakanyanya.
Heino vhidhiyo pfupiso yekuti LeadJen anoshandisa sei Jesubi:
Mukati meLeadJen, kumisikidzwa kwaJesubi kwakave kubudirira kukuru:
Muna 2006, LeadJen yaive pakati 7.2 kubata kwemaawa pamushandi -Kubata kuve email inotumirwa, voicemail yakaunzwa, kana hurukuro inobudirira uchishandisa tekinoroji yechinyakare seSalesforce.com, Netsuite kana Microsoft CRM.
Muna Kubvumbi 2007, isu takaburitsa yekutanga vhezheni yeJesubi yekushandisa kwemukati kweLeadJen. Mukati memazuva makumi matatu ekutanga, kugadzirwa kwavo kwakasvetuka kubva pa30 yekubata kwemaawa kusvika zvinopfuura gumi neshanu zvinobata paawa - kuwedzera kweanopfuura 200%.
Ipuratifomu yakanaka kwazvo, kutaura zvazviri, kuti ikozvino chigadzirwa chavanobvumidza nekutengesa. Jesubi yakawedzera uye zvino inowirirana ne Salesforce, Microsoft uye Netsuite CRMs. Jesubi ndomumwe Yakayera Kambani yekutengesa pano pakati peIndiana.
Jesubi akadzoreredzwa muna2013 uye ndiye Salesvue LLC. Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve yavo yekuzvarwa sales automation app muApp Exchange.
Kutsvaga Yekushambadzira Yekushandisa Mikana